The Girl on the Train (2016) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
R 2016 112 min Crime, Drama, Mystery
IMDB: 6.5/10 147,251 votes
Mary Bailey, Tate Taylor
Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another4wins & 10 nominations.
ဒီတခါတော့ လူတယောက်အပေါ်ကို ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေကို ပြောင်းလဲသွားနိူင်လောက်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိူင်တဲ့ psychological thriller ဇာတ်လမ်းကောင်းတပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကားလေးက New York Times’ Best Selling ထဲမှာTop Ten ထဲ ပါဝင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တခုကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်ရိုက်ထားပါတယ်။ October7မှာစတင်ရုံတင်ခဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ based on the thriller that shocked the world ဆိုပြီး ပြောထားလို့ true story လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
(Rachel)သူမနက်တိုင်းရုံးသွားရင်ရထားပဲစီးလေ့ရှိပါတယ်။ ရထားပေါ်ကနေနေ့စဉ်မြင်နေကျအရာတွေထဲမှာ Jess နဲ့ Jasson လို့သူမမှတ်ယူခဲ့တဲ့ လင်မယား၂ယောက်ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံသော marriage life လေးကို Rachelဟာအားကျနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ရထားပေါ်ကနေသူမ ဘယ်လိုမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရချိန်ကစပြီး Rachel ရဲ့ဘဝဟာရှုပ်ထွေးလာခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာလူသတ်မှုတရားခံအဖြစ်လဲစွပ်စွဲခံလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်း…..ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာ သိချင်ရင်ဒီကားလေးမှာ ဆက်လက်ခံစားကြပါလို့။
ဇာတ်အိမ်လေးကအရမ်းမိုက်ပြီး မထင်မှတ်လှည့်ကွက်တွေပါတဲ့အပြင် ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးက ကြည်ရှူသူတွေကို shock ရစေမှာပါ?
ဒါကြောင့်မိုလို့ 2016 ထဲက လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ကားဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Mary Bailey Tate Taylor
Allison Janney Darren Goldstein Edgar Ramírez Emily Blunt Haley Bennett Justin Theroux Laura Prepon Lisa Kudrow Luke Evans Rebecca Ferguson
Alexander Jameson Alice Niedermair Allison Janney Athena Stuebe Brian Esposito Conor Hovis Craig Moruzzi Danielle M. Williamson Darren Goldstein Doris McCarthy Eddie Sellner Edgar Ramírez Emily Blunt Faith Logan Frank Anello Gregory Morley Guy Sparks Haley Bennett Hannah Kurczeski Jalina Mercado Jesse VanDerveer John Norris Justin Theroux Kevin D. McGee Kristina Nichole Lana Young Laura Prepon Leilah Marie Giddens Lisa Kudrow Luke Evans Lynne Valley Mac Tavares Marko Caka Mauricio Ovalle Nathan Shapiro Peter Mayer-Klepchick Phil Oddo Rachel Christopher Rebecca Ferguson Ross Gibby Samantha Lee Johnson Sergei Ashurov Sidney Beitz Tamiel Paynes Tim Wiencis Tod Rainey
Option 1 drive.google.com 527 MB SD (480p)
Option2cloud.msubmovie.com 527 MB SD (480p)
Option3onedrive.live.com 527 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 527 MB SD (480p)
Option5myandrive.com 527 MB SD (480p)
Option6megaup.net 527 MB SD (480p)
Option 8 onedrive.live.com 1.3 GB HD
Option9cloud.msubmovie.com 1.3 GB HD
Option 12 myandrive.com 1.3 GB HD
Option 13 drive.google.com 4.63 GB FHD DTS-X 7.1
Option 14 cloud.msubmovie.com 4.63 GB FHD DTS-X 7.1
Option 15 drive.google.com 4.63 GB FHD DTS-X 7.1
Option 16 myandrive.com 4.63 GB FHD DTS-X 7.1
Option 17 megaup.net 4.63 GB FHD DTS-X 7.1
Option 18 yuudrive.me 4.63 GB FHD DTS-X 7.1
American Psycho (2000) 2000